समुद्र तट मा sam | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! समुद्र तट मा sam | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
समुद्र तट मा sam सफल एल्क स्लट विद्युत sam संग लडी छ. यो क्यारेबियन मा एक सुन्दर समुद्र तट आफ्नो परिवारलाई यो समय छुट्टी मा छ जो नै वर्ण निम्नानुसार. Join him in the fun in this Mobile Slot Game and win up to 2,275 पटक आफ्नो शर्त.
मा आ देखि 2012, एल्क स्टूडियो एक प्रमुख अनलाइन क्यासिनो खेल विकासकर्ता रूपमा नै पहिचान सफल भएको छ. यो मोबाइल स्लट खेल कम्पनी द्वारा विकसित अर्को रमाइलो अनलाइन स्लट छ.
यो मोबाइल स्लट खेल कुल प्रदान 243 जसमा तरिकामा तपाईं यो स्लट मा जित्न सक्छौं. पाँच रील आंशिक पारदर्शी र सुन्दर बीच एक दृश्य दिन. स्पष्ट आकाश संग सफा समुद्र तट, खजुरका यहाँ र त्यहाँ समुद्र तट dotting, र एक प्यारा परिवार दृश्य पूरा. कम तिर्ने प्रतीक मन मा समुद्र विषय राख्दै हुनुहुन्छ र नियन रंग छ जो रूपरेखा बाहेक पारदर्शी चित्रण गरिएको छ. उच्च मूल्य प्रतीक ट्रोल को परिवारका सदस्यहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै. sam, पत्नी Sandra, आफ्नो छोरी Maggie, र आफ्नो भाइ टेड विशेष सुविधाहरू सबै आउन.
यो मोबाइल स्लट खेल को अन्य सुविधाहरू समावेश:
फ्री Spins- हिट 3, 4, वा5घण्टी स्क्याटर प्रतीक र प्राप्त 5, 10, वा 15 मुक्त spins. तपाईं राउन्ड समयमा हिट प्रत्येक अतिरिक्त घण्टी प्रतिमा तपाईं एक अतिरिक्त निःशुल्क स्पिन प्रदान गर्नेछ.
बिजुली व्यवहार- निःशुल्क spins समयमा लैंडिंग कुनै पनि परिवारका सदस्यहरूले विशेष सुविधाहरू प्रदान.3वा सुविधा समयमा लैंडिंग थप शमू प्रतीक तपाईं टाँसिएको wilds प्राप्त हुनेछ.3वा सुविधा समयमा लैंडिंग थप Sandra प्रतीक handsomely अप गर्न 10x गुणक तपाईंलाई इनाम दिनुहुनेछ.3सुविधा समयमा लैंडिंग Maggie प्रतीक सबै कम मूल्य प्रतीक रील देखि अचानक हराउनु गर्नेछ.3सुविधा समयमा लैंडिंग टेड प्रतीक तपाईं 2x वा 3x को टाँसिएको multipliers प्राप्त हुनेछ.
समुद्र तट सम्झना Respin- जब तपाईं नियमित खेल मा नै पङ्क्ति सबै परिवारका सदस्यहरूको एक सीधा लाइन छ, यो सुविधा रूपबाट. तपाईं एक respin सम्मानित छन् जहाँ यी सबै परिवारका सदस्यहरूले टाँसिएको wilds परिणत.
यो नै कुरा को एक सम्पूर्ण धेरै पैक. यो ठूलो दृश्यहरू छ, रोचक विषय, र बोनस सुविधाहरू भार. मोबाइल स्लट खेल कार्य प्रशस्त प्रदान, निःशुल्क spins सुविधा विशेष गरी समयमा.